मन्त्रिपरिषद्मा हंगामा मच्याएको त्यो अति गोप्य वार्ता... - Gandak News
मन्त्रिपरिषद्मा हंगामा मच्याएको त्यो अति गोप्य वार्ता…
गण्डकन्यूज द्वारा प्रकाशित	 १८ कार्तिक २०७४, शनिबार २०:१० मा प्रकाशित
‘तपाई बिहे गर्ने हो ?’ पण्डितले सुशीललाई सोधे । ‘के भनेको ?’ सुशीलले च्याँठिदैं प्रतिप्रश्न गरे । ‘बिहे पनि नगर्ने सन्तान पनि नजन्माउने भए भविष्यप्रति तपाईको के को लोभ ?’ पण्डितले अर्को प्रश्न थपे । ‘मलाई के को लोभ ?’ कोइरालाले प्रश्नमा प्रश्न थपे । ‘तपाईको देशबाहेक सोच्नुपर्ने अरु केही छ ?’ पण्डितले फेरि प्रश्न गरे । कम बोल्ने सुशीलले जवाफ फर्काए, ‘छैन ।’
पण्डितले त्यसपछि सोझै प्रस्ताव गरे, ‘त्यसो भए डिभीपिआर लिन नपाउँने गरी निजामति कर्मचारी ऐन संशोधन गर्न तपाईले आँट गर्नुप¥यो ।’
गोप्य बैठक सकिएपछि सरासर दुबै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गए । प्रायजसो मन्त्री आइसकेका थिए । बैठक शुरु भयो । एकपछि अर्को मन्त्रालयका प्रस्ताव पारित हुँदै गए । अन्तिममा सुशीलले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावका बारेमा बोल्न पण्डितलाई आग्रह गरे । पण्डितले प्रस्ताव राखे ।
अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत जुरुक्क उठे । उनले ‘कुनै पनि हालतमा प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने’ जिकिर गरे । त्यसपछि सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल उठे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख को ? तपाई की पण्डित ? पटकपटक एउटै कुरा ।’ त्यसपछि एनपी साउँद उठे र भने, ‘यसले लाखौं नेपालीलाई चिढ्याउँछ ।’ एमालेका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेब गौतम पनि उठे । उनले पनि महत र रिजालकै पक्षमा धारणा राखे ।
सबैको धारणा सकिएपछि सुशील कोइराला एक छिन केही बोलेनन् । पण्डितको मनमा चिसो पस्यो, ‘अघिको सल्लाहले काम नगर्ने हो कि ?’ सुशीलले निर्णय सुनाए, ‘धेरै कुरा भइसक्यो यो बारेमा । आज पास गरिदिऊँ । पास भयो ।’
अमेरिका पुगेका महतले त्यसैबेला घोषणा गरेका थिए, ‘लालबाबुले ल्याएको प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पारित हुंने छैन ।’ लालबाबुलाई शुरुशुरुमा सञ्चार माध्यमले उतिसारो मतलब पनि गरेका थिएनन् । अन्तरवार्ता लिइहाले उनलाई सोधिन्थ्यो, ‘काँग्रेसले डाक्टरहरुलाई मन्त्री बनायो । उनीहरुसँग बहश गर्न तपाईहरु जस्तो अनुभव र डिग्री नभएकाले सक्नुहुन्छ ?’ टिप्पणी पनि लेखियो काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरुको तुलना गरेर ।
एकातिर मन्त्रिपरिषद्मा महत र उनीजस्तै डाक्टरहरुको चुरीफुरी अर्कोतिर बाहिर यस्ता टिप्पणी । पण्डितलाई केही नयाँ गर्ने अठोट थियो । उनले डिभीपिआर लिने कर्मचारीका बिरुद्ध बहश छेडे । यसले महतलाई साह्रै घोच्न थाल्यो । अन्ततः आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव पास भनिदिएपछि महतको मुख मलिन भयो । त्यसपछि महत र पण्डित मन्त्रिपरिषद्मा दुई ध्रुब जस्ता रहे ।
भारतीय राजदूत रन्जित रेले जिज्ञासा राखे, ‘भारतको रासनकार्ड लिएकालाई पनि सो नियम लागू हुन्छ ?’ पण्डितले भनिदिए, ‘रासन कार्ड भनेको त नागरिकता जस्तै हो, त्यस्तालाई त झन् लाग्छ ।’ रन्जितले भेटका लागि समय मागे । उनले परराष्ट्रसँग समन्वय गरेर आउन सुझाए । प्रधानमन्त्रीलाई समेत चाहेको बेलामा सरासर भेट्न बानी परेका रेले अफ्ठयारो मान्दै ‘ओके’ भने ।
परराष्ट्रले रेका लागि पण्डितसँग समय माग्यो । कुटनीतिक प्रक्रिया पूरा गरेर भेट्न आएका रेले नेपाल भारतको सम्बन्धको विशिष्टताका बारेमा व्याख्या गर्न थाले । २२ मिनेटको संवादपछि पण्डितले कडा प्रश्न गरे, ‘नेपालको बिमानस्थल हुँदै रअ को प्रमुख अमेरिका भागेको याद छ नि ?’ रेले आफूलाई थाहा भएको जनाउँन मुन्टो हल्लाए । ‘जासुश प्रमुख नै बिदेश भाग्दा कस्तो लाग्यो ?’ पण्डितले प्रश्नमार्फत प्रहार गरे । रेले सो घटनाले आफूहरुको चित्त दुखेको प्रतिक्रिया दिए । यस्तै घटना नेपालमा पनि नहोस् भनेर आफूले ऐन संशोधन गर्न चाहेको पण्डितले प्रष्टिकरण दिए । त्यसपछि रे बाहिरिए । बोडेदेखि रेसम्म, महतदेखि मृदुलासम्मलाई चिढाएर कोइरालाले प्रस्ताव पारित गरेका थिए ।
साँझसम्म सरसाउँदा रहेका कोइराला मध्यरातमा दिवंगत भएको खबर फैलियो । खबर थाहा पाउँदा बित्तिकै पण्डितको मनमा आंशका पैदा भयो, ‘कतै त्यही प्रस्ताव पारित गरेकै कारण कुनै षडयन्त्र त भएन ?’ कोइरालाको निधन अस्वभाविक भएको भन्दै काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा कुरा पनि उठ्यो । त्यो त्यत्तिकै सेलायो ।
नेपाल आज १ असोज २०७३
‘छोराछोरी विदेश पठाएर प्रत्येक घर वृद्धाश्रम । खै धर्म, संस्कृति ?’ – नेपाल केशरी डा. मणिभद्र मुनीजी महाराज
दुबै मृगौला फेल भएकी गंगाले अस्पतालबाटै गरिन सहयोगको पुकार, दुई नाबालकको बिजोग (भिडियो)
को हो त्यो नाथे निर्मला ? (भिडियो सहित)
पोखरामा हुने ‘ई-प्लानेट अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटी फेयर’ मा ३ दर्जन…
सामाजिक शिक्षा नेपालीमै किन?
किसान; कार्यालय सहयोगीदेखि सफल व्यवसायी